Mushure meBhuku rePurazi - Nei iri CBD Oiri "Pamutemo" mumatunhu ese makumi mashanu?
Ko CBD mafuta zviri pamutemo mumatunhu ese makumi mashanu here?
CBD Mafuta Zviri Pamutemo Kubva muna 2018 Purazi Bhiri muna Zvita 2018
CBD Oiri yawanda uye vanhu vazhinji vanoti zviri pamutemo mune zvese makumi mashanu zviitiko
Mhoroi, ini ndiri we cannabis indasitiri gweta kupindura yako cannabis pamutemo mibvunzo kuitira kuti iwe ugone kuita yakajaira mitemo mbanje. Uye nhasi tine mubvunzo wakanaka kubva kune wakareba kwenguva yakareba watarisisa uye zvese-zvakatenderedza kazhinji zvinotyisa mukomana. Tichasvika kune izvo chaizvo munguva pfupi.
Asi chekutanga, iwe uchazoda kunamatira kusvika kumagumo nekuti ndipo pauchazondiona ndichipunzika kumusoro uye kukanda pasi mukunyangadza uyu mufananidzo waRichard Nixon.
Asi tisati tasvika kumubvunzo wanhasi, enda uye wasiya wako mune zvakataurwa pazasi. Handikwanise kupindura mubvunzo wako kunze kwekunge waubvunza. Uye iwe uchinge uri pasi apo, tipe akadaro uye zvigunwe kumusoro.
Mubvunzo wanhasi unobva kuna JX Fit, uye anobvunza, "Kune makambani mazhinji anoti vanounza CBD hemp ruva kune ese matunhu makumi mashanu, uye zviri pamutemo zvachose nekuti ine pasi pe50% THC uye haibvi chirimwa chembanje. Izvo zvinobva kune hemp chirimwa. Zviri pamutemo here?"
Mubvunzo wakanaka. Uye kuti titange, ngatiitei chokwadi chekuti tichave tichifukidza zvese mutemo wemubatanidzwa neyehurumende, tobva tave kutaura nezve zvishoma hupfumi, zvishoma zvemabhizimusi economics 101.
Teerera iyo paPodCast kana Tarisa iyo YouTube pa iri cbd mafuta zviri pamutemo mumatunhu ese makumi mashanu
RELATED POST: Maitiro Ekuvhura kweCannabis Dispensary muIllinois
RELATED POST: Maryland Cannabis Gweta
CBD yave yakakurumbira, uye vanhu vazhinji vari kutora njodzi nekuve bhizinesi nekutengesa mafuta aya eCCD.
Ini ndaingotaura nemunun'una wangu. Anopa CBD mafuta kune imbwa yake. Iwe unogona zvakare kupa CBD mafuta kune imbwa yako. Handina chokwadi.
Zviri pamutemo here? Huye, nyika dzakawanda, dzakawanda, dzakawanda nyika dzakaona iwo mwenje kana zvasvika kuCBD neyese yekurapa yekurapa iri kuenderera kuunganidza nezvezvakanakira, uye isu hatisi kuzenge tichikurukurana nezvebhenefiti dzeCBD nhasi, asi tichava kukurukura makumi matanhatu neshanu izvo zvakanyoresa imwe nzira yekurapa mbanje kana CBD oiri yekushandisa mukurapa.
Muchokwadi, kune mana chete matunhu asina kunyoreswa zviri pamutemo zvekurapa CBD, uye idzo ina nyika ndiIdaho, South Dakota, Kansas, uye hongu, Nebraska.
Ah, ndinofunga ivo vachiri kuda mutemo wehurumende iyo iri Kudzvinyirirwa Zvinhu Zvinhu, icho chiri chimwe chezvikonzero nei tichizobvarura mufananidzo uyu waRichard Nixon gare gare. Iyo Inodzora Zvinhu Zvinhu iyo inopa zvese zve cannabis chiitiko chimwe chinhu, icho zvirokwazvo chinosanganisira hemp. Hemp, sezvo iri kukura mumunda, ingori pasi pe Inodzorwa Zvinhu Zvinhu kurambidzwa semamwe cannabis.
Uye funga nezvazvo, nekuti kana iwe uri kukura cannabis maererano neayo maricho zvinangwa, iri maruva, iwe unozozvigadzira nenzira yakakura zvakasiyana pane kana iwe uri kukura hemp yeiyo stock yayo, furu yayo, kana kunyange yayo yakatarwa mhodzi, inonakidza inokwana, inosiyirwa Mutemo unodzorwa.
Saka iwe paunoenda kuChatcoco uye unozvitengera wega iyo hemp moyo, iyo hemp mwoyo iyo iwe unogona kuwana iyo yakazara hemp mwoyo, iyo iwe yaunogona kuwana kuchitoro chako, ivo varipo nekuti ivo vanonyatsosarudzika kubva kuDzinodzorwa. Zvinhu Zvekuita.
Kungofanana nefuru kana tambo yaizobvisirwa kunze, kana mombe, hempherds, stock irimo, iyo ine maindasitiri zvinhu mairi.
Zvino vangaite sei kuti ataure kuti zvinobva kuhemp uye saka zvinoregererwa? Zvakanaka, havagone. Zvimwe vari kuvhiringidzwa nezviri kuuya.
Zvimwe vari kuedza kutarisira musika. Tinenge tave kutaura nezve chinhu chemabhizimusi pano zvishoma. Kutanga, isu tichafamba isu pachedu kuburikidza nemutemo we federal uye shanduko yemasangano kune hemp.
Ndiri Illinois. Nguva pfupi yadarika, nezuro zvazviri, Bruce Rounder akasaina Illinois 'mutyairi hemp chirongwa, saka tinokwanisa kutanga kupa zano kuvarimi vari mudunhu nezvekuti vangarime sei hemp senzira yekudyara zvirimwa.
Bhazi rekurima harisati rauya pasi, uye kana uchida zvimwe kuti utevedze nhau papurazi rehurukuro ne hashtag #FarmBillFriday, uye iwe uchange uchiwana mhinduro kubva kuCongress nezve iyo purazi rekubhadhara iyo ine hemp yekunyoreswa mutauro. akaiswa mubhiri neSenator McConnell anobva kuKentucky. Akatanga chirongwa chemityairi wehemp pane imwe federal makore mashoma kumashure, uye izvo zvave kuenda nenzira kwayo kwayo. Zvino isu bhazi rekurima harisati rapfuura.
Iyo Bhiri Bhiri Yakapfuura uye CBD Hemp yakava mvumo pamutemo munaZvita 2018.
Ngatitaurei zvoupfumi kuti sei munhu uyu ari kuita dudziro? Nekuti ini ndakanakisa cannabis magweta aripo. Ndozvatinoti mumutemo, puffery. Nekudaro, kazhinji kana iwe ukataura chimwe chinhu zviri pamutemo, iwe hausi kunyatsotaura kuti ndiyo yakanyanya kunaka. Nekuti kana iwe ukataura chimwe chinhu chakanyanya kunaka, chinhu chakakodzera.
Iyo "Yakanyanya" hemp inogona kushambadzira.
Zvakanakisa kwauri. Kana ini ndiri kuteerera Miles Davis, uye ndinofunga iye ari nani mutambi hwenondo kupfuura John Coltrane, iyo ingori semantic nharo pane zvandinoda kupesana nezvamunoda. Zvangu zvakanaka hazvisi zvako zvakanaka.
Zvemutemo kazhinji kazhinji zvishoma kutemwa uye yakaoma. Iko hakuna kufanana nechinhu chepamutemo chakanakisa. Unogona kutaura kuti ndiwe Gweta rakanakisa, asi hapana tsime, iri pamutemo, iro rinowanzove remubvunzo hongu / hapana. Kana paine chero indasitiri uko ichave yakaoma zvikuru kupindura, ndiyo indasitiri ye cannabis, nekuti hapana kumbobvira chaipo chekuti hongu / hapana mhinduro maererano neyakagwinya mune cannabis uye iyo CBD mafuta inotorwa kubva kune hemp ruva, iro rinoita nzwisiso yakawanda.
Akazobvunza nezve 0.3%. Kazhinji kazhinji hemp maruva ane yakawanda CBD mairi, asi idiki THC. Ndozvazviri Handizive. Ndinoti kwauri, iwe paunonyanya kudzidza nezveiyi federal nemitemo yese ye cannabis, iwe wakanyanya kufanana, saka pamwe unogona kushandisa legity sechipo izwi rinopesana neshoko rekuwandisa uye bvunzo hongu / kwete.
Izvo Kushaikwa kweCBD Mirairo Kubva kune Chikafu uye Dhiganisi YezveMabatiro Zvinoreva kuenda Bhizinesi?
Saka kana ndiri muzvinabhizimusi uye ini ndogona kugadzira jack yakawanda kubva mukutengesa CBD mafuta, ndotarisa data racho, ndokuona kuti CBD iri kuwedzera kukurumbira, zviri pamutemo mumatunhu 46, zviri pamutemo padanho rehurumende. , nekuti pamwe ungati iri mbanje yekurapa, asi iwe urikuti neyako inotorwa kubva kuhemp, uye wakamirira bhiri repurazi.
Zvino pane chero munhu akaita chero danho here? Ehe hongu, iyo FDA yakatumira mamwe mabhii uye kurega-nyora mavara kune mashoma epamhepo mabhizinesi e-CBD emafuta mu2015 na 2016, asi ini handina kuona chero munhu akasungwa, achibatwa mumawoko, uye akaita kuti mabhizinesi avo eCCD avharwe. Zvichida ndizvo zvavari kutaura nezvazvo. Nekuti mutemo wakangonaka sekuti vanhu vangani vari kuenda kunoisimbisa. Ini ndinogona kutaura kuti kumhanya kwemamita makumi manomwe mamaawa neawa, kana pasina munhu aripo kuzove gavhuna wekutaura kuti makumi mairi maawa neawa, kumhanya kwechikamu chinhu, handiti?
Saka Jeff Septs haana kuvhara chero chinhu. Sei? Pane sarudzo munaNovember, asi zvakare pamwe vanoziva manzwiro eruzhinji akafanana, uye ivo vanoziva kuti #FarmBillFriday iri kuburuka, uye ivo vanoziva kuti 46 nyika dzakatoita izvi zviri pamutemo, uye vanotenda, pamwe, sainzi shure kwayo.
Saka ivo vanoda kuti vanhu vacho vanyatsokwanisa kuwana yakakwira mhando yeCBD mafuta, ndosaka vari kuti zviri pamutemo. Izvo zvinokanganisa mukutengesa parlance. Zvinoshamisa kwazvo puffery mukutengesa parlance, nekuti tsika kazhinji haizi chinhu chinokodzera chaunodada nacho. Asi mune iyi kesi, pamwe.
Uye yakawanda sei data uko? Huye, ichi chiumbwa chakanaka, uye isu tava kuzopedzisa chikamu pane… tarisa, kwete. Isu tichazopedza chikamu ichi nekupomera Richard Nixon, achipwanya ruoko rwake rwakaipa, kumeso. Asi izvi zvisati zvaitika, ngatitaurei nezve kuti yakawanda sei CBD mafuta yakaputika maererano…
Kana iwe uchida kuona kana chimwe chinhu chakakurumbira, unogona kuona icho chiri kutsvaga, kana kana chimwe chinhu zvachinja nekufamba kwenguva, ndiwo maitiro. Uye kune matatu mitsara yatiri kuenda kupfuura. Ndichaisa izvozvi. Iwe unoona iri bhuruu, yero, uye tsvuku, uye tsvuku iri kungobvisa. Chii chakatsvuka? Zvakanaka, ngatitangei kupfuura pamusoro pebhuruu.
Bhuruu ipapo pazasi, kunyanya chigadziko, ndiye hemp. Uye sezvaurikuona, hemp haisi kuenda chaiko. Uye iyo iri pamusoro payo, iyo iyo ndiyo tambo tsvuku yakatsemuka, zvinoita sekunge yadzoreredza zvakare munaFebruary wa 2017, iyo ndiyo cannabis.
Uye sezvaurikuona, cannabis inzira inozivikanwa kupfuura hemp, asi haina nzvimbo pedyo neyakakurumbira seiyi cannabidiol, aka CBD yakave yakadaro. Tarisa uone. Izvo zvakangotanga kumashure chete makore mana apfuura kana zvakadaro, uye zvakange zvinoita sekunge zvisina kunzwiwa, uye sekumwe kusingazivikanwe, sa hemp. Uye ikozvino zvangoenda.
Sevanhu vanonzwisisa zvakanyanya nezve CBD uye Medical Marijuana uye vakuru-shandisa mbanje uye cannabis inowedzera. Huye, pakupedzisira, pakupedzisira, zvakapusa, zvinhu zveupenzi zvakaitwa nemurume uyu muna1970 kuti ave nechokwadi chekuti hemp yakaverengerwa muDare Rakadzorwa Zvinhu, kunze kwekutengesa, furu kana mbeu yakasvibiswa, pakupedzisira ichagadziriswa.
Ah ndinokuvenga iwe, Richard Nixon. Iyi ndiyo mhosva yako.
Cannabis Indasitiri Gweta Inokutora iwe CBD Mibvunzo maererano neFederal Hemp Laws
Kana iwe uine chero mibvunzo, tapota uvabvunze mune zvemashoko kana kushanya cannabisindustrylawyer.com uye tinya pane isu call bhatani. Kusvikira ndakuona inotevera nguva, yeuka, chengeta zviri pamutemo.